Maamulka Jubbaland oo masaafurinaya saraakiil katirsan NISA – Somali Top News
Maamulka Jubbaland oo masaafurinaya saraakiil katirsan NISA
August 15, 2018 Somali Top News	0 Comments
(STN-MUQDISHO):_ Sida uu qorshaha yahay Jubbaland ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku soo celineysaa Saraakiil ka tirsan NISA oo shalay un gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiishan ayaa xalay waxa ay ku hoydeen xabsi ku yaalla garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo, halkaasi oo saakay laga soo saarayo diyaarad, taasi oo keeneysa magaalada Muqdisho.
Jubbaland ayaa sababta ay u xirtay Labadan Taliye waxa ay ku sheegtay inaan laga tali gelin magacaabista Taliyeyaashan iyo inay imaanayaan magaalada Kismaayo, waxayna tilmaamtay in dowladda ay ka baxday heshiis ay la gashay maamul goboleedyada.
Sidan oo kale maamulka Jubbaland 13-kii July ee sanadkan waxay garoonka Kismaayo ka celiyeen diyaarad siday Gen. Cali Bogmadow oo ay Dowladda u magacowdey qeybta 43-aad ee Ciidanka xoogda dalka, inkastoo markii dambe xal laga gaaray.
← Dad laga soo badbaadiyay buundo ku burburtay dalka Talyaaniga
Ciidamada Dowladda oo howlgal ku khaarijiyay Saraakiil iyo Askar katirsan Al Shabaab →
August 1, 2019 August 1, 2019 Somali Top News 0
Boolis rasaaseeyay gidaarka laga ilaaliyo guriga Sheekh Shariif
April 1, 2020 April 1, 2020 Somali Top News 0
Akhriso: Ajandaha kulanka xildhibaanada Golaha Shacabka ee maanta